Sawirro: Andalus Oo Qabatay Barnaamij Lagu Taakulaynayay Dhismaha Masjid Kuyaal Degmada Buula Fuulay.
Sunday November 05, 2017 - 16:26:13 in Wararka by Super Admin
Idaacadaha Andalus ayaa xalay laga baahiyay barnaamij gaar ah oo dhaqaale loogu ururinayay Masjid jaamaca Buulo fulay oo muddo dheer uu dhismihiisu soo jiitamayay kaasoo hadda heer gabogabo ah maraya.
Barnaamijka waxa ka qayb galayay qaar ka mid ah culimada wilaayaadka Islaamka iyo gudida dhismaha Masjidka.
Gudida ayaa ka warbixisay heerarka ay isla soo mareen dhismaha masjidka, iyagoo sheegay in wakhtigii abaartii ay kusoo aaday dhismaha masjidka isla markaasina uu hakad galay, kadibna ay dib u bileebaan. marka hadda aad aragto dhismaha masjidka aadbaad ugu farxaysaa, sababtoo ah wuxuu marayaa heer gabogabo ah, wuxu rabaa kaliya waa dhamaystir.
Ugu dambayn gudida ayaa Idaacadda ka baahiyay Nambarro gaar ah oo ay ugu talo galeen inay dhaqaale ugu ururiyaan Masjidka, waxana isla markiiba mashuuql noqay Nambarradaasi oo dadwaynihii idaacadda dhagaysanayay ay aad usoo wacayeen lacagana ay kusoo shubayeen.
Gudida ayaa sheegay inay aad ugu farxeen sida ummaddu u ajiibtay baaqooda iyagoo muslimiinta ka codsaday in lasii wado taakulaynta si masjidka dhakhso loosoo gabogabeeyo.
Halkan ka akhriso Nambarada gaarka u ah gudidada dhaqaalaha Masjidka.
Halkan hoose ka daawo sawirrada Masjidka oo heer gabogabo ah maraya.